Real Madrid oo baxar ku jirta, kaddib markii ay fariin kaga timid….. – Gool FM
(Madrid) 22 Agoosto 2019. Kooxda ka dhisan caasimada Madrid ee dalka Spain ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay baxar dhexda kaga jirto, kaddib markii ay fariin kaga timid goolhaayaha reer Costa Rica ee Keylor Navas.
Goolhaayaha reer Costa Rica iyo kooxda Real Madrid ee Keylor Navas ayaa ka codsaday saraakiisha Los Blanos in laga fasaxo garoonka Santiago Bernabéu, sida ay shaacisay saaxaafada dalka Spain
Keylor Navas ayaa aaminsan in la gaaray waqtigii uu gabi ahaanba ka tagi lahaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabéu, si uu u raadiyo loolan kale cusub ee meel kale ah.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain, saraakiisha kooxda Real Madrid ayaa ka warqabta rabitaanka goolhaaye Navas ee ah inuu ka tago Bernabéu, waxayna durba bilaabeen inay raadinayaan isaga badalkiisa.
Navas ayaa waxaa si aad ah u dooneya Paris Saint-Germain, gaar ahaan tan iyo markii uu ka tagay Gianluigi Buffon oo dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Juventus.
Laakiin agaasimaha ciyaaraha ee kooxda ku ciyaarta garoonka Parc des Princes ee Leonardo Araújo ayaa wuxuu doorbidayaa inay lasoo wareegaan goolhaayaha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma marka loo fiiriyo Keylor Navas.
Qiimaha suurtogalka ah ee lagu heli karo adeega Donnarumma ayaa gaarsiisan 50 milyan euro, halka Paris St Germain laga yaabo inay kula soo saxiixato goolhaayaha Donnarumma ee Keylor Navas lacago dhan 20 milyan oo euros.